Ingaba unabo na ubomi obungunaphakade?
Umbuzo: Ingaba unabo na ubomi obungunaphakade?
Impendulo: Ibhayibhile ibonisa ngokucacileyo indlela eya ebomini obungunaphakade. Okokuqala, kufuneka sazi ukuba sonile kuThixo: "Kuba bonile bonke baye basilela eluzukweni lukaThixo" (KwabaseRoma 3:23). Sonke sizenzile izinto ezingamkholisiyo uThixo, ezisenza sifanelwe kukohlwaywa. Kuba izono zethu zichasene nephakade likaThixo,sifanelwe kuphela sisohlwayo sanaphakade. "Umvuzo wesono kukufa,kodwa inceba kaThixo bubomi ubungunaphakade ngenxa kaYesu Kristu iNkosi yethu" (KwabaseRoma 6:23).